Kungani ukhetha amabheji ephinikhodi ye-Kingtai Custom lapel IMIDALI namaketanga okhiye, inselelo yezinhlamvu zemali
Singabakhiqizi bezikhonkwane ezenziwe ngokwezifiso zoqweqwe lwazo, imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso ngamanani athengekayo, isevisi yamakhasimende enobungane newusizo - lezi ezinye zezizathu zokukhetha i-Kingtai.Sinamandla okulethwa okusheshayo nokuklama, kodwa sakha amabheji ephinikhodi engeziwe. .Ububanzi bethu...
I-KingTai Company ingumkhiqizi ophelele wokuhweba ohlanganisa ukukhiqiza nokudayisa.Sinefektri yethu nethimba labadayisi baphesheya kwezilwandle, imboni yethu itholakala eSifundazweni sase-Hui Zhou City Guangdong.Selokhu yasungulwa, inkampani ithole izitifiketi ezingaphezu kuka-30...
I-KingTai Company ingumkhiqizi ophelele wokuhweba ohlanganisa ukukhiqiza nokudayisa.Sinefekthri yethu kanye nethimba labadayisi baphesheya kwezilwandle, imboni yethu itholakala e-Hui Zhou City Province Guangdong.Isilinganiso somthamo wethu wokukhiqiza ungaphezu kuka-300,000 pcs njalo ngenyanga. Inkampani yethu ineminyaka engaphezu kwengu-20 ...
Liyini izinga lomkhiqizo?
“Ikhwalithi yomkhiqizo isho ukuhlanganisa izici ezinamandla okuhlangabezana nezidingo zabathengi futhi inikeze ukwaneliseka kwamakhasimende ngokushintsha umkhiqizo ukuze ukhululeke ekushiyekeni noma ekushiyekeni.” Enkampanini: Izinga lomkhiqizo libaluleke kakhulu enkampanini. Lokhu kungenxa yokuthi, imikhiqizo yekhwalithi embi w...